फिचर Archives - UrjaKhabar फिचर Archives - UrjaKhabar
काठमाडौं । स्वस्थ रहन तय गरिएका मापदण्डको परिपालन घरबाट सुरु हुन्छ । घर अझ भनौं भान्छाको उचित व्यवस्थापन स्वस्थ जीवनकाे एक अचुक उपायमध्ये हो । पछिल्लो समय भान्छा व्यवस्थापन वा स्वस्थकर भान्छाको पहिलो पूर्वसर्त चुलोलाई मानिएको छ । खाना वा परिकार बनाउने चुलो वा त्यसका लागि चाहिने ऊर्जा कसरी कुन स्रोतबाट उपलब्ध छ, त्यसैमा स्वस्थ जीवनका धेरै अवयव जोडिएका हुन्छन् ।
विरामी व्यक्तिका लागि घर पहिलो अस्पताल अर्थात् उपचार केन्द्र पनि हो । यसैले, भान्छामा उपयोग हुने ऊर्जाले नै स्वस्थ जीवनको आधार निर्धारण गरेको हुन्छ । देशको आर्थिक विकासको एउटा कडी स्वस्थ जीवन पनि हो । स्वस्थ जीवन र औसत बाँच्ने उमेरले कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको हुन्छ ।
प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जानु नै व्यक्तिको बाच्ने दर बढ्नु हो । र, यसको आधार स्वस्थ जीवनयापनलाई मान्ने गरिएको छ । यी सबैको मापन गर्ने धरातल फेरि पनि स्वस्थ जीवन हो । घर हो । भान्छाको उचित व्यवस्थापन र त्यहाँ उपयोग हुने ऊर्जा नै हो । स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगले स्वस्थ जीवनको जग हालेको हुन्छ ।
आज विकसित देशमा भान्छामा पूर्ण आधुनिक ऊर्जा (विद्युत् वा ग्यास) उपयोग गरिन्छ । विस्तारै यसको दर कमविकसित वा अर्धविकसित र अविकसित देशमा घट्दै गएको हुन्छ । अफ्रिकी मुलुक तथा एसियाली वा दक्षिण एसियाली कमविकसित र अविकसित मुलुकले भान्छामा आज पनि परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
नेपालको हकमा भान्छामा आधुनिक ऊर्जा प्रयोग गर्ने जनसंख्या निकै कम छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने आज पनि ६८.७ प्रतिशत (करिब २ करोड ६ लाख) जनसंख्या परम्परागत ऊर्जामा निर्भर छ । यसमध्ये अधिकांशले भान्छामा अर्थात् खाना पकाउन परम्परागत ऊर्जा (दाउरा, गुइँडा आदि) प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आधुनिक ऊर्जा (विद्युत्) उपभोग गर्ने जनसंख्या ३.२ प्रतिशतमात्र छ । करिब ३ करोड जनसंख्या मध्ये ९ लाख ९६ हजारले मात्र आधुनिक ऊर्जा प्रयोग गरेको देखिन्छ । यही आधारमा खाना पकाउन विद्युत् उपभोग गर्ने संख्या पनि कम नै छ ।
हालै अर्थ मन्त्रालयले बाहिर ल्याएको तथ्यांक अनुसार ८७.५ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । तर, खाना पकाउन दाउरा वा परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गर्नेको संख्या ६२.५ प्रतिशत छ । यस्तै, एलपिजी ग्यास प्रयोग गर्नेहरू २२.५ प्रतिशत छन् ।
सरकारले सन् २०२२ सम्म हरेक घरमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । यो सँगै सन् २०३० सम्म हरेक घरमा स्वच्छ ऊर्जाबाट खाना पकाउने व्यवस्था (क्लिन कुकिङ) गर्ने रणनीति छ । सरकारले यही रणनीतिअनुसार नीति तथा कार्यक्रम पनि तयार गरेको छ । तर, कार्यान्वयन फितलो देखिन्छ ।
भान्छामा स्वच्छ ऊर्जा भन्ने वित्तीकै विद्युत् नै भन्ने हुँदैन । परम्परागत रूपमा प्रयोग हुने चुलोलाई समय र प्रविधि अनुसार अधुनिकीकरण गर्दै भान्छालाई स्वच्छ बनाउन सकिन्छ । भान्छामा दाउरा प्रयोग गरे पनि कम धूवाँ आउने वा धुँवा निष्कासन गर्ने प्रविधिमा बनेका चुलो प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसले मानव स्वास्थ्यलाई धेरै हदसम्म जोगाउँछ ।
क्लिन कुकिङ भन्ने बित्तिकै अन्ततः विद्युतीय चुलो वा भान्छामा विद्युत् उपभोग भन्ने बुझिन्छ । सरकारको अन्तिम लक्ष्य पनि यही हो । तर, भान्छामा विद्युत् बाहेकको आधुनकि ऊर्जा वा बायोग्यास (गोबरग्यास) पनि प्रयोग गरेर स्वच्छ भान्छा र जनजीवनलाई जोड्न सकिन्छ । अर्धसहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्यास निर्माण तथा सञ्चालन प्रभावकारी पनि भइरहेको छ ।
Nirmala Thapa, Dhadali village, Baajura district, Nepal.
भान्छामा आधुनिक ऊर्जा
२०६८ सालको जनगणना अनुसार ५४ लाख घरपरिवारमध्ये ४० लाखले खाना पकाउने इन्धनको रूपमा दाउरा लगायत परम्परागत जैविक ऊर्जा प्रयोग गर्ने गर्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार अल्पविकसित देशमा मृत्युको चौथो कारण घरभित्रको वायु प्रदुषणलाई मानेको छ ।
देशभित्रै गरिएको एक अध्ययन अनुसार वार्षिक करिब ७ हजार ५ सय व्यक्तिको मृत्यु घरभित्रको वायु प्रदुषणले गर्दा लाग्ने विभिन्न रोगबाट हुने गरेको छ । भान्छामा लामो समय बिताउने महिला तथा बालबालिका यसबाट बढी प्रभावित हुने गरेको देखाइएको छ । अर्कोतिर, दाउरा संकलन गर्ने प्रमुख कार्यभार महिलाको हुने र यसले पनि उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको औंल्याइएको छ ।
सहरभन्दा अर्धसहरी र ग्रामीण क्षेत्रका महिला तथा सर्वसाधारण यसबाट प्रभावित भइरहेका छन् । घरभित्रको वायु प्रदुषण कम गर्दै नागरिकमा स्वच्छ जीवनको प्रत्याभूति गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले विभिन्न कार्यक्रम परिचालन गर्दै आएको छ ।
केन्द्रले धूवाँ रहित भान्छा बनाउने उद्देश्यले विभिन्न नीति नियम ल्याइएको छ । यसले क्लिन कुकिङका लागि विद्युत् सहित बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, ग्यासिफायर, ब्रिकेट/पिलेट, को–जेनेरेसन, फोहोरबाट ऊर्जा जस्ता स्रोतको उच्चतम उपयोगलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
केन्द्रका अनुसार हालसम्म देशभर करिब १४ लाख घरमा सुधारिएको चुलो जडान गरिएको छ । यस्तै, ३ लाख ६५ हजार घरमा बायोग्यास र करिब ६ सय परिवारमा सौर्य कुकर जडान गरिएको केन्द्रले जानकारी दिएको छ । यसरी घरभित्र खाना पकाउन आधुनिक ऊर्जाको उपयोग बढिरहेको देखिन्छ ।
देशमा अहिलेसम्म ४ लाख ३१ हजार साना बायोग्यास निर्माण गरिएको छ । साथै, २ सय ९९ वटा ठूला आकारका प्लान्ट बनेका छन् । यसबाट भान्छाका लागि आवश्यक इन्धन, उज्यालोका लागि बिजुली र कृषिका लागि मलको जोहो पनि हुँदै आएको छ । यसले ‘क्लिन कुकिङ’ प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुधन अधिकारी बताउँछन् ।
‘स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा क्लिन कुकिङमा ऊर्जा मन्त्रालयको प्रयासमात्र पर्याप्त हुँदैन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरणसँग पनि समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तीन मन्त्रालयले समन्वय गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने र त्यसमार्फत काम गर्नु अबको अपरिहार्यता हो ।’
बढ्दो विद्युत् उत्पादन र यसको खपतबीच सन्तुलन मिलाउन पनि उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विद्युत् खपत बढाउने एकमात्र भरपर्दो विकल्प कुकिङ नै रहेको पनि उनको निचोड छ ।
केन्द्रका अनुसार अहिलेसम्म २ सय घनमिटरभन्दा ठूला आकारका ७ वटा बायोग्यास निर्माण भइसकेका छन् । यही साइजका २५ वटा निर्माणाधीन छन् । यस्तै ठूला आकारका ५ सय ८६ प्लान्ट देशभरि निर्माण गर्न विभिन्न निकायले माग गरेका छन् । नेपालमा करिब ११ लाख बायोग्यास प्लान्ट निर्माणको सम्भावना औंल्याइएको छ ।
सहर र गाउँ
खाना पकाउन आधुनिक इन्धन (ऊर्जा) को प्रयोग गाउँको तुलनामा सहरमा बढी छ । सहरमा निरन्तर विद्युत आपूर्ति, भौगोगिक दृष्टिले सुगम र विद्युतीय घरायसी उपकरणको सहज उपलब्धताले पनि फरक परेको हुन्छ । पछिल्लो समय देशका प्रमुख सहरमा इन्डक्सन (विद्युतीय चुलो) प्रयोगकर्ता बढेको देखिन्छ ।
विद्युत उत्पादन बढेसँग यसको नियमित आपूर्ति हुँदा यो विस्तारै अर्धसहरी क्षेत्रमा समेत प्रयोगमा आउन थालेको छ । यद्यपि, लागतका दृष्टिले महँगो, सहज उपलब्ध नहुने र विद्युत्को भोल्टेजमा आउने उतारचढाले अर्धसहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चुलोको उपयोग त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन ।
पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रमा बायोग्यास, एलपिजी ग्यास, सुधारिएको चुलोको प्रयोग बढ्न थालेको छ । यद्यपि, यो क्षेत्रमा चेतनाको कमी तथा चुलो मर्मत गर्ने ठाउँ वा व्यक्ति नहुँदा एक पटक बिग्रेपछि पुनः परम्परागत इन्धन (दाउरा, गुइँठा) मा फर्किने गरेको पाइएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सहरमा बस्ने ७८ प्रतिशतले खाना पकाउन एलपिजी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै, बायोग्यास २ प्रतिशत, गुइँठा २ प्रतिशत, दाउरा १७ प्रतिशत प्रयोग हुने गरेको छ ।
यसैगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा कूल जनसंख्याको ६३ प्रतिशतले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तै, १७ प्रतिशतले एलपिजी, १० प्रतिशतले गुइँठा, ७ प्रतिशतले पातपतिगंर, २ प्रतिशतले बायोग्यास र १ प्रतिशतले अन्य इन्धन प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख छ । विभिन्न निकायले फरक-फरक तथ्यांक बाहिर ल्याए पनि औसतमा ६०-६५ प्रतिशत जनसंख्याले आज पनि खान पकाउन परम्परागत ऊर्जा प्रयाेग गर्ने गरेकाे पुष्टि हुन्छ ।
स्वच्छ ऊर्जामा काम गरिरहेको प्राक्टिकल एक्सन नेपालले पनि जिआइजेड लगायत दाताको सहयोग तथा सहकार्यमा स्वच्छ ऊर्जा र क्लिन कुकिङ विस्तारमा काम गरिरहेको छ । आधुनिक तथा सुधारिएको चुलोको पहुँच पुर्याउनुका साथै यसलाई दिगो रूपमा प्रयोग गर्ने संयन्त्र विकासमा प्राक्टिकल एक्सनले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
यो संस्थाले अबको एक वर्षमा ५ हजार घरधुरीमा सुधारिएको चुलो जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसले गएका ५ वर्षमा ४६ हजार घरमा सुधारिएको चुलो जडान गरेकाे थियाे । यसले विशेषतः महिलाकाे जीवनस्तर माथि उठाउने गरी समावेशीतामा जाेड दिएकाे देखिन्छ ।
भान्छा वा चुलोमा महिला बढी खटिनुपर्ने हुँदा उनीहरूलाई प्रयोगकर्ता नबनाई उद्यमी समेत बनाउने गरी काम गरिरहेको प्राक्टिकल एक्सनकी ऊर्जा प्रमुख पूजा शर्माले बताइन् । ‘एक पटक जडान गरेपछि पुग्यो भन्ने होइन,’ उनले भनिन्, ‘चुलो बनाउनेदेखि प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउने, प्रयोग गर्ने र बिग्रेमा आफैंले मर्मत गर्ने संयन्त्रको विकासमा लागि रहेका छौं ।’
ग्रामीण क्षेत्रका महिलालाई उद्यमी बनाउने उद्देश्य अनुसार क्लिन कुकिङमा काम भइरहेको शर्माको भनाइ छ । भूगोलको बनोटअनुसार गाउँ पनि दुर्गम र सुगम हुन्छन् । त्यस्ता क्षेत्रमा सर्वसाधारणको माग र आर्थिक हैसियतअनुसारको चुलो जडान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आज गाउँगाउँमा डोकोमा बोकेर एलपिजी ग्यास पुर्याइएको छ । यो स्वच्छ ऊर्जा भए पनि आयातित हो । जसलाई विस्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसको ठाउँमा विद्युतीय चुलो उपयोग गर्नु देशका लागि बढी लाभदायक हुन्छ । तर, गाउँमा यसको पहुँच हुँदैन । त्यसैले, सुधारिएको चुलोको प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने शर्मा बताउँछिन् ।
क्लिन कुकिङमा सरकारका अनुदान तथा सहयोग नीति पनि छन् । त्यसको कार्यान्वयन गर्दा निजी क्षेत्र र एनजिओ/आइएनजिओसँग सहकार्य गर्नुपर्ने शर्माको जोड छ । ‘गाउँमा प्रयोग हुने बायोग्यास नै हो, सरकार पुग्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई काम दिन सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार, निजी क्षेत्र र एनजिओबीच बाँडफाँड गरेर समन्वयका आधारमा काम गरियो भने लक्ष्य हासिल हुन्छ ।’
स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणबीच अन्योन्यास्रित सम्बन्ध हुन्छ । जब स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढ्दै जान्छ तब वातावरण पनि स्वतः स्वच्छ हुँदै जान्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा भान्छाका लागि प्रयोग हुने इन्धन (दाउरा) वनमा निर्भर हुनुपर्छ । वन कटान हुँदै जाँदा त्यसले स्थानीयस्तर, कृषि र देशमा त असर परेकै हुन्छ । विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तन असर बढाउन पनि मद्दत गरेको हुन्छ ।
यसर्थ, दाउराको प्रयोग घटाउनु वा कम गर्नु पनि स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग हो । सरकारले देशभर ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, पछिल्लो विवरणअनुसार देशमा वनको क्षेत्रफल करिब ४६ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ । यसो हो भने वनलाई पनि वैज्ञानिक दृष्टिले उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देशका कुन क्षेत्रमा वनको क्षेत्रफल बढिरहेको छ, त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गरी त्यस्ता क्षेत्रमा सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्ने र कम भएका क्षेत्रमा संरक्षण गर्न सकिन्छ । वनबाट झिकिएको इन्धन (दाउरा) प्रशोधन गरी आधुनिक वा सुधारिएको चुलो मार्फत प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्य तथा घरभित्र काम गर्ने महिला र वालवालिका कम प्रभावित हुन्छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असर घटाउन वा राज्यको एउटा आम्दानीको स्रोत कार्बन व्यापार बढाउन वन संरक्षण पहिलो आवश्यकता हो । यो सँगसँगै वनको वैज्ञानिक उपयोगको पनि त्यतिकै महत्त्व छ । ग्रामीण क्षेत्र सुगम र अति दुर्गम ठाउँ पनि छन् । अझ हिमाली उच्च हिमाली क्षेत्र स्वच्छ ऊर्जाको पुहँचबाट धेरै टाढा छन् । यस्ता क्षेत्रका लागि इन्धनका लागि वन उपयोग पहिलो आवश्यकता हुन्छ ।
त्यस्ता क्षेत्रमा कम वन प्रयोग गरेर बढी इन्धनको आपूर्ति गर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । जैविक कृषि विस्तार र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनिकरण गर्न पनि वन संरक्षण तथा उचित सदुपयोग आवश्यक रहेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले बताए ।
‘वन संरक्षण, पेट्रोलियम तथा एलपिजी आयात घटाउन अब विद्युतीय चुलोमा जानुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘सहरमा विद्युतीय र गाउँमा सुधारिएको चुलो, बायोग्यास र अन्य आधुनिक ऊर्जा प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । मन्त्रालयको समन्वयमा केन्द्रले यसरी नै काम गरिरहेको छ ।’
Kaushi Thapa, Paima village, Baajura district, Nepal.
स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जामा लामो समयदेखि केन्द्रले काम गरिरहेको छ । सहरदेखि गाउँसम्म स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याई सोही अनुकूलको भान्छाको प्रविधि विकासमा पनि केन्द्रको उल्लेख्य भूमिका छ ।
कन्द्रले चालू आर्थिक वर्ष (२०७७/७८) मा क्लिन कुकिङ विस्तारमा १ करोड अमेरिकी डलर बजेट छुट्ट्याएको छ । जसबाट तराईमा गुइँठा विस्थापन गरी विद्युतीय चुलो तथा बायोग्यास, सुधारिएको चुलो विस्तार गर्ने योजना छ । यो सँगै पेलेटस, ब्रिगेड जस्ता आधुनिक ऊर्जा इन्धन उपयोगबाट पनि क्लिन कुकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ ।
केन्द्रले टियर–३ स्तरको गुणस्तरीय घरायसी ऊर्जा तथा चुलोको विकासलाई समेत उतिकै महत्त्व दिएको छ । यता एसियाली विकास बैंक (एडिबी), विश्व बैंक लगायत विकास साझेदार निकायले पनि क्लिन कुकिङमा सहयोग पुर्याउँदै आएका छन् । जसका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा परिचालनमा सहजीकरण भएको देखिन्छ ।
सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर राख्दै अब हरेक घरमा सुधारिएको वा विद्युतीय चुलोको प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्ने केन्द्रका सहायक निर्देशक मुकेश घिमिरे बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी रूपमा वन विनाश रोक्नु तथा वातावरण संरक्षण मुख्य मुद्दा बन्दै आएको छ,’ उनी ऊर्जा खबरसँग भन्छन्, ‘यसका लागि जनचेतना जगाउँदै घरभित्र वा भान्छामा आधुनिक ऊर्जा प्रयोगमा अभ्यस्त बनाउन जरुरी छ ।’
केन्द्रले आगामी ५ वर्षभित्र १० लाख घरमा सुधारिएको चुलो प्रयोगमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यसमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ । ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको कार्यक्रमलाई हरित जलवायु कोष (ग्रिन क्लाइमेट फन्ड) ले सहयोग गर्नेछ ।
यसैगरी, इस्पामले सहयोग गर्ने ‘क्लिन कुकिङ कार्यक्रम’का लागि ३ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बजेट राखिएको छ । ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको कार्यक्रम अन्तर्गत ७ लाख घरधुरीमा विद्युतीय चुलो जडान गर्ने लक्ष्य छ ।
नयाँ संविधानले नै स्वच्छ वातावरणमा बाच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यो सँगै स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा भान्छामा उपयोग हुने इन्धन प्रयोगलाई वातावरणमैत्री गर्न दर्जनौं नीति, नियम, रणनीति र कार्यक्रमहरू तयार गरिएको छ । यी कानुनी प्रावधानले कतै न कतै स्वच्छ ऊर्जा विकास तथा क्लिन कुकिङलाई प्रवर्द्धन गरेका छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यको सातौं लक्ष्यमा सन् २०३० सम्म विश्वभर सबैका लागि गुणस्तरीय, आधुनिक र नियमित ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने भनिएको छ । नेपालले पनि यसैलाई आधार मानेर काम गरिरहेको छ । जसअनुसार सन् २०३० सम्म खाना पकाउने इन्धनको रूपमा प्रयोग भइरहेको दाउरा ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।
यसैगरी, हाल २२.५ प्रतिशतले प्रयोग गरिरहेको एलपिजी ग्यासलाई ३९ प्रतिशतमा रोक्ने लक्ष्य छ । विस्तारै आयातित ग्यास विस्थापित गर्दै भान्छामा आधुनिक ऊर्जा तथा विद्युत् उपयोग बढाउने सरकारको रणनीति छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाख २५ गते जारी गरेको ‘श्वेतपत्र’मा समेत क्लिन कुकिङ अर्थात् विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । श्वेतपत्रको ७३औं बुँदामा भनिएको छ– ‘घरघरमा विद्युतीय चुलो’ प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुलो जडान गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यस कार्यक्रमबाट ग्यास आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटालाई न्यून गरिनेछ ।
१५औं पञ्च वर्षीय योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) ले पनि स्वच्छ, दिगो र भरपर्दो ऊर्जा पहुँचलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै स्थानीय तह तथा शतप्रतिशत जनतामा विद्युतीय पहुँच पुर्याउने १५औं योजनाको मुख्य लक्ष्य छ ।
यो सँगै योजना अवधिभर २ लाख घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, ५ लाख सुधारिएको चुलो र ग्यासिफायर (तापीय विद्युतीय प्रविधि) जडान गर्ने लक्ष्य छ । साथै, १० लाख विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य छ । यसो हुँदा सरकारले नीतिगत तहमा पनि भान्छामा स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने पक्षलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । कानुनको तयारी र यसको कार्यान्वयनमा तालमेल मिलाउने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न त्यति गाह्रो देखिँदैन ।
साथै, विगतमा ग्रामीण ऊर्जा नीति, जलवायु परिवर्तन नीति, नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति लगायत तयार गरिएको छ । केन्द्रीय नवीकरणीय ऊर्जा कोष स्थापना गरी घरायसी प्रयोजना हुने इन्धनलाई आधुनिक ऊर्जामा रूपान्तरण गर्ने पहल हुँदै आएको छ ।
अझ जैविक ऊर्जा रणनीतिले सन् २०३० सम्म क्लिन कुकिङमा हरेक घरमा टियर–३ प्रविधिको स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । भान्छामा उपयोग हुने स्वच्छ ऊर्जाको पनि गुणस्तर हुन्छ । जति बढी गुणस्तरीय ऊर्जा (कम प्रदुषण हुने) उपयोग गरियो त्यति नै मानj स्वास्थ्य सुधार हुन्छ ।
रणनीतिले सोही अवधिभित्र २० हजार मेट्रिक टन पेलेटस, ब्रिगेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य सुनिश्चित गरेको छ । त्यतिबेलासम्म ६ लाख घरायसी बायोग्यास उपयोगमा आउने समेत अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले हरेक घरमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउनु पहिलो सर्त मानेको छ । यस्तै, अबका दिनमा विद्युत् खपत बढाउनु पनि त्यतिकै अपरिहार्य भइसकेको छ । उता ग्रामीण क्षेत्रमा सुधारिएको चुलोको प्रयोगबाट सर्वसाधारणको दैनिकी सरल बनाउनु उतिकै खाँचो छ । यी पक्षबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सरकारले केही हस्तक्षेपकारी नीति अंगिकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विद्युत् खपतमा जोड दिँदै विद्युतीय चुलो र यस्तै घरायसी उपकरण आयात तथा प्रवद्र्धनमा जोड दिनु जरुरी छ । तर, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता उपकरण आयातमा थेग्नै नसक्ने गरी भन्सार शुल्क बढाइदिएको छ । यसो हुँदा सहरमा विद्युतीय चुलो मार्फत विद्युत खपत गर्ने योजनामा धक्का पुगेको छ । उता आयातित एलपिजी ग्यास विस्थापित गर्ने सरकारको आफ्नै लक्ष्यमा समेत असर परेको छ ।
सरकारले चाह्यो भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यसलाई केही खुकुलो बनाएर जान सक्छ । यो सँगै ग्रामीण क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा पुर्याउनु मुख्य चुनौती हो । यसमा सचेतना मुख्य काम हो । साथै, एक पटक जडान भएको विद्युतीय वा बायोग्यास वा सुधारिएको चुलो कसरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्छ ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्दा स्थानीय निकाय वा त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग परामर्श गरेकै हुन्छ । अब यो सँगै निजी क्षेत्र र स्थानीय तहमा काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थालाई समेत संलग्न गराउँदा काम अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । भान्छाबाट परम्परागत इन्धन (दाउरा) विस्थापित गर्ने काम दिगो भयो भने मात्र यसले परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
तोकिएका क्षेत्रमा काम गर्दा के कति काम केन्द्र सरकारले गर्ने ? प्रदेश वा स्थानीय तहको भूमिका के हुने र त्यसमा निजी क्षेत्रलाई कसरी संलग्न गराउने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ । सबै ठाउँमा सरकारको काम प्रभावकारी नहुन सक्छ । सरकारी निकाय पुग्न नसकेका क्षेत्रमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर निजी क्षेत्र तथा एनजिओलाई परिचालन गर्नु उचित हुन्छ । तर, यसमा सरकारी निकायको सहयोग र समन्वय उतिकै जरुरी हुन्छ ।
स्थानीय तहमा सुधारिएको चुलो बनाउने वा आधुनिक प्रविधिका चुलो प्रयोगको तरिका सिकाउनुपर्छ । बिग्रेका चुलो मर्मत कसरी गर्ने वा स्थानीय तहमै यससम्बन्धी उद्योग स्थापनामा प्रेरित गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यसले भान्छाबाट परम्परागत इन्धन विस्थापित गर्ने पहलमा कोसेढुंगाको काम गर्न सक्छ ।
योजनासँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो निर्माण गरी प्रयोगकर्तासम्म पुर्याउन सरकारी निकायले सक्दैनन् । यस्तो ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ । उनीहरूले काम गर्दा आधुनिक प्रविधिमा निर्माण भएका चुलो उचित मूल्यमा वितरण गर्न सक्छन् । कतिपय सरकारी अनुदानबाट काम भएका ठाउँमा पनि कार्यान्वयनको जिम्मा निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ । यसरी ग्रामीण क्षेत्रमा क्लिन कुकिङलाई दिगो रूपमा स्थापित गर्ने आधार बन्न सक्छ ।
काठमाडौं । कोरोना भइरस (कोभिड–१९) विनाशकारी प्राकृतिक विपत्तिभन्दा ठूलो महामारी बनेर आयो । यो बेला विश्व आतंकित छ । अर्थव्यवस्थाका पिलरहरू ढलिरहेका छन् । यसबट नेपाल कसरी जोगिन सक्छ र ! देशको सिंगो अर्थतन्त्र पनि दिनहुँ तासको घरझैँ भत्किरहेको छ ।
समृद्ध मुलुक निर्माणको मेरुदण्ड ऊर्जा तथा जलविद्युतलाई मानिएको छ । सबैभन्दा बढी महामारी यही क्षेत्रले झेलिरहेको छ । देशका हरेक क्षेत्रसँग जलविद्युत व्यवसाय जोडिएको छ । यो व्यवसायको सोझो सम्बन्ध नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छ । आजको दिनमा विद्युत क्षेत्र उत्थान, व्यवस्थापन, विस्तार र व्यावसायिकरण गर्ने दरिलो पिलर प्राधिकरण नै हो भन्दा अत्योक्ति हुँदैन ।
विडम्बना, यही प्राधिकरण कोराना महामारीले धराशायी हुँदैछ । ऊर्जा तथा जलविद्युतमा सरकार र निजी क्षेत्रको १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ । यो लगानी सुरक्षित गर्ने पहिलो निकाय प्राधिकरण नै हो । जबसम्म यो संस्था दरिलो हुँदैन तबसम्म ऊर्जाका अरू क्षेत्र जोगिएर उभिने आधार हुँदैन ।
अहिले ३ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन् । अर्को ३ हजार मेगावाट निर्माण चरणमा पुगेका छन् । यिनको विद्युत किनिदिने एउटै निकाय आजको दिनमा प्राधिकरण मात्र हो । हुन त सरकारले नयाँ विद्युत ऐनको मस्यौदा संसदमा पेश गरेको छ । त्यसमा उत्पादन, वितरण र प्रसारणका फरक–फरक निकायको प्रावधान छ । तर, पूर्णतः त्यसरी प्रणालीले काम गर्न कम्तीमा १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
किन्ने, बेच्ने, सेवा दिने र गुनासो सुन्ने निकाय फेरि पनि त्यही प्राधिकरण नै हुनेछ । अब यसको अस्तित्व नै संकटमा परेपछि देशको अर्थतन्त्रमा ‘खतराको घन्टी’ नबज्ने कुरै भएन । निजी क्षेत्र होस् वा आफ्नै सहायक कम्पनीको बिजुली किन्नु, किनेबापतको भुक्तानी दिन नसक्नु, प्रसारण लाइन समयमा नबन्नु, आन्तरिक खर्च बढ्दै जानुले यो संस्था कुन अवस्थामा पुग्ला अहिले नै आकलन नगरौं ।
झन्डै ४ वर्षअघि प्राधिकरण नेतृत्वमा आएका कुलमान घिसिङ सुरुका वर्ष लोडसेडिङ हटाएकोमा निकै चर्चित भए । अब जिम्मेवारीमा उनी रहिरहने हो भने विकराल बन्दै गएको समस्या टार्न उनको विवेकले कुनै काम गर्ने छैन । विपद् र दिनहुँ बढिरहेका समस्याले घेरिएर उनी अहिले नै छट्पटिइरहेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा सस्तो चर्चा कमाउने, नाफा–घाटाका अपत्यारिला अंक बाहिर ल्याउने र कामको जस आफूतिर खिच्ने उनका योजनाले अब काम गर्दैनन् । हिजोका दिनमा दिगो प्रणाली स्थापना गर्ने भन्दा व्यक्तिको हुकुमी शैली हाबी भयो । प्रणालीको जग खासै दरिलो देखिँदैन । यद्यपि, अब यहाँ एउटा घिसिङले गरेर मात्र हुने केही होइन । हिजोका कामलाई समीक्षाको तुलोमा जोखेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ ।
देशको सिंगो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ, प्राधिकरण । ऊर्जाको बागडोर यसैसँग छ । नाफा–घाटा, समृद्धि–अवन्नतिको जड अब ऊर्जा क्षेत्र नै हुनेछ । र, यसको आधार प्राधिकरण नै हो । यसलाई जोगाउने, उकास्ने र देशलाई समृद्धिको उचाईमा पुर्याउने जिम्मेवारी हरेक निकायको हुनुपर्छ । अबका दिनमा कुन–कुन कारणले प्राधिकरण ढल्दै छ, यसबारे सक्षिप्त चर्चा गरौं ।
१. आम्दानी घट्नु
कोभिडको प्रत्यक्ष असर अहिले प्राधिकरणको आम्दानीमा परेको छ । आफ्ना विद्युतगृह, सहायक कम्पनी, निजी क्षेत्र र भारतबाट किनेको बिजुली बेचेर आउने रकम प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । यसबाट उसले वार्षिक ६०–६५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँथ्यो । यो बाहेक ब्याज, सहायक कम्पनीबाट पाउने मुनाफा लगायत आम्दानीका द्वित्तीय स्रोत हुन् ।
प्रतिकूल परिस्थितिमा विद्युत महसुल उठ्न सकेको छैन । महसुल तिर्नुभन्दा दैनिकी चलाउनु सर्वसाधारणका लागि पहिलो आवश्यकता हो । हरेक उपभोक्ता अहिले दैनिकी चलाउनमै केन्द्रित छन् । महसुल तिर्न चाहे पनि लकडाउनका कारण सकेका छैनन् ।
प्राधिकरणले अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न बारम्बार आह्वान गरिरहेको छ । तर, ४० लाख ग्राहकमध्ये निकै थोरै मात्र अनलाइन प्रणालीमा अध्यस्त छन् । यही कारण उठ्नुपर्ने महसुल उठिरहेको छैन । प्राधिकरणका भुक्तानी काउन्टर यो समयमा खुल्ने कुरै भएन ।
सामान्य अवस्थामा प्राधिकरणले दैनिक २० करोड रुपैयाँ (मासिक करिब ६ अर्ब) सम्म महसुल उठाउँथ्यो । तर, अहिले दैनिक ५०–६० लाख रुपैयाँ मात्र उठिरहेको छ । यति रकमले प्राधिकरणको दैनिकी चलाउनै हम्मे परिरहेको देखिन्छ । अहिले प्राधिकरणको मासिक २ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी घटिरहेको छ ।
२. भुक्तानी समस्या
आम्दानी घटेपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रबाट किनेको विद्युत्को भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन । महसुल उठ्न नसकेको र काबुबाहिरको परिस्थिति घोषणा गर्दै भुक्तानीको समय धकेलेको छ । निजी क्षेत्रका ९३ विद्युतगृहले प्राधिकरणलाई विद्युत बेचिरहेका छन् । उनीहरूलाई मासिक डेढदेखि २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
लकडाउनका सुरु दिनमा रोकिए पनि अहिले भुक्तानी भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । यद्यपि, निजी क्षेत्रले भुक्तानी नपाइरहेको गुनासो गरेका छन् । निजी क्षेत्र आफूले पाउनुपर्ने रकम नपाउँदा उसका दैनिकीदेखि दीर्घकालीन गतिविधि प्रभावित भएका छन् ।
नियमित गर्नुपर्ने विद्युतगृह मर्मत, बैंकको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलब तथा सामाजिक सुरक्षा रोकिएका छन् । प्रतिकूल समयमा विद्युतगृहमा निरन्तर खटिएको तर तलब नपाएको भन्दै कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भइरहेको प्रर्वद्धकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अर्कोतर्फ, नियमित विद्युतगृह मर्मत नहुँदा आउने वर्ष विद्युत उत्पादन कम हुने संकेत देखिएको छ । प्राधिकरणले तोकेको ऊर्जा नपुगे जरिवाना तिर्नुपर्ने, बैंक ब्यज तिर्न समस्या हुने र आयोजना नै रुग्ण हुने खतरा छ । सुरुमा प्रवर्द्धक तथा लगानीकर्तामा असर पर्नेछ । यसपछि प्राधिकरण, जलविद्युत, बैंक र अर्थव्यवस्थामा देखिनेछ ।
३. विद्युत खेर फाल्नु
कोभिड असर तथा यसको रोकथाम गर्न सरकारले लकडाउन गरेपछि औद्योगिक क्षेत्र पूर्णतः बन्द भए । उद्योगमा ३ सय देखि साढे ३ सय मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने गरेको थियो । उद्योग नै बन्द भएपछि विद्युत उपभोग हुने कुरै भएन । यही कारण प्राधिकरणको आम्दानी पनि गुम्यो ।
प्राधिकरणका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको उच्च माग करिब १३ सय मेगावाट थियो । तर, लकडाउनले माग करिब ५० प्रतिशत घटेको छ । अहिले उच्च माग ९ सय मेगावाट (एक वा आधा घन्टा मात्र) भए पनि औसत साढे ६ सय मेगावाट छ । उत्पादित वस्तुको खपत आधा घटेपछि आम्दानीमा पनि सोही बराबरको असर पर्ने भयो ।
रातीको समयमा त माग साढे ४ सय मेगावाटमा झरेको छ । तर, प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रका आयोजना पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छन् । मुलुकको जडित क्षमता करिब १२ सय मेगावाट पुगेको छ । यद्यपि, उत्पादन त्यति हुँदैन । खोलामा पानीको बहाब विस्तारै बढिरहेकाले उत्पादन ७ सय मेगावाट भन्दा बढी भइसकेको छ । खपत घट्दो छ ।
निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको काम पूर्ण क्षमतामा नभएकाले त्यहाँ खपत हुने विद्युतसमेत घटेको छ । यो समयमा भारतबाट विद्युत किन्नु परेको छैन । उताबाट विद्युत किन्नु नपर्दा दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ बचत भएको छ । तर, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी लाइनको वार्षिक १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ह्विलिङ चार्ज तिर्नैपर्छ । तराईको वितरण भारतसँग जोडिएकाले प्रणाली जोगाउन पनि केही विद्युत किन्नैपर्छ ।
लकडाउन बढाउँदै जाने तर औद्योगिक क्षेत्र नखोल्ने हो भने बर्खामा उत्पादन भएको आधा विद्युत खेर फाल्नुपर्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताइरहेका छन् । प्राधिकरणलाई अर्को समस्या के छ भने निजी क्षेत्रसँग टेक अर पे (लिउ या तिर) प्रावधानमा विद्युत किन्ने सम्झौता छ ।
यदि, निजी आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भए आफ्ना विद्युतगृह बन्द गरेर उसको विद्युत किन्नैपर्छ । यसो हुँदा प्राधिकरणले आफ्ना विद्युतगृह चलाउन पाउँदैन र यसबाट हुने आम्दानी पनि गुमाउँछ । मुख्य आम्दानी हुने उत्पादित वस्तु खेर जाँदा वा फ्क्ट्रीमै बन्द हुँदा कुन संस्थाकाे उन्नति हुन्छ ? उता निजी क्षेत्रको किन्नैपर्ने बाध्यता र यसबापतको भुक्तानीले संस्था दोहोरो घाटामा जान्छ ।
४. चुहावट बृद्धि
अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत खपत छैन । जे जति लोड छ, त्यो गार्हस्थतर्फ हो । जति धेरै गार्हस्थ लोड बढ्छ त्यति नै प्राविधिक वा अप्राविधिक चुहावट बढ्छ । गार्हस्थको तुलनामा औद्योगिक क्षेत्रको वितरण प्रणाली सबल र गुणस्तरीय छ । यसो हुँदा गार्हस्थमा लोड बढाउनु चुहावट पनि बढाउनु हो ।
सर्वसाधारणका घरघरमा ११ केभी भोल्टेजबाट सेवा प्रवाह हुन्छ । यस्ता लो भोल्टेजका वितरण प्रणाली निकै नाजुक अवस्थामा छन् । विद्युत प्रवाहको भार धान्न नसक्दा दिनमा पटक–पटक यस्ता लाइन ट्रिप (तार चुड्ने, जल्ने, आगलागी हुने ट्रान्सफर्मर पड्कने) हुने गर्छन् ।
देशमा घोषित लोडसेडिङ छैन तर दिनहुँ लाइन काटिइरहन्छ । सामान्य हावा–हुरी वा असिना पर्दा कमजोर वितरण लाइनमा भार पर्छ र विद्युत अवरुद्ध हुन्छ । यस्तो प्रणाली पूर्ण स्तरोन्नती गर्न प्राधिकरणले योजना अघि बढाएको छ । तर, आजको भोलि हुँदैन । वर्षौं अझ दशकौं लाग्न सक्छ ।
गार्हस्थतर्फ लोड बढेपछि प्राविधिक चुहावट थपिने सम्भावना हुन्छ । मिटर बाइपास गर्ने, मिटर बिगार्ने वा हुकिङ जस्ता चोरीका गतिविधि पनि गार्हस्थमै हुन्छन् । यसो हुँदा हाल करिब साढे १३ प्रतिशत रहेको विद्युत चुहावट ह्वात्तै बढ्ने संकेत देखिन्छ । यसले पनि प्राधिकरणको अर्थव्यवस्थामा ठूलो असर पुर्याउनेछ ।
५. निर्यात असम्भव
भारतसँग विद्युत व्यापार र ऊर्जा बैंकिङ सम्झौता भएको छ । कामचलाउ अवस्थासम्म प्रसारण लाइन पनि तयार छन् । तर, व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना छैन । किनकि, भारतीय खुद्रा तथा थोक बजार वा दीर्घकालीन व्यापार गर्न मूल्य तोकिएको छैन ।
नेपालबाट बिक्रीकर्ता प्राधिकरण भए पनि उता किन्ने निकायको टुंगो छैन । विद्युत बेच्दा प्रसारण लाइन शुल्क (ह्विलिङ चार्ज), अल्पकालीन वा दीर्घकालीन बिक्री दर जस्ता विषय अन्योलमै छन् । कहिले काहीँ प्राधिकरणले यति बिजुली भारत बेच्यो भन्ने चर्चा हुन्छ । त्यो बिक्री होइन ।
बिजुली जता माग बढी हुन्छ त्यतै बग्छ, पानी जस्तै । नेपाल–भारतबीच प्रसारण लाइन सिंक्रोनाइज (आवद्धता) भएका कारण यता माग कम हुँदा त्यो स्वतः उता बगेर जान्छ । जुन निकै थोरै परिमाणको हुन्छ । यसरी स्वतः बगेर जाने बिजुली बिक्री होइन ।
बेच्नलाई निश्चित बाटो (प्रसारण लाइन) तय हुनुपर्यो । बजार र दर तोकिनुपर्यो । यी काम नहुँदासम्म नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न सक्दैन । बर्खामा बढी हुँदा उता दिने र हिउँदमा चाहिँदा ल्याउने ‘बैंकिङ’ गर्न पनि यी काम नहुँदासम्म सम्भव छैन । बर्खामा उब्रेको बिजुली बेच्न नसक्दा प्राधिकरणलाई अर्बौं नोक्सान हुन्छ ।
६. खर्च बृद्धि
प्राधिकरणको आम्दानी घट्दैछ । खर्चमा कमी आएको छैन । बरु बढिरहेको छ । प्राधिकरणमा स्थायी, म्यादी र ज्यालादारी गरी १० हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । उनीहरूको तलब-भत्ता कटौती हुने कुरा भएन । अझ लकडाउन समयमा कति कर्मचारी भर्याङ बोकेर विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन दौडिरहेका छन् ।
ती कर्मचारीलाई थप तलब–भत्ताको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यसले खर्च झनै बढाउँछ । विद्युतगृह मर्मत-संभार, प्रसारण तथा वितरण लाइन स्तरोन्नती लगायत नियमित काम रोकिने भएनन् । यी नियमित खर्च टार्न प्राधिकरणसँग नगद मौज्दात छैन ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको जनाएको छ । तर, यो कागजी नाफा हो । आज पनि संस्था १२ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा छ । खर्बौं-खर्बको व्यवसाय तथा कारोबार गर्ने संस्थामा आज पुगनपुग ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात छ । नगद मौज्दात नभएकैले निजी क्षेत्रसँग किनेको विद्युतको भुक्तानी रोकिएको हो । यही अवस्था रहिरहे आफ्ना कर्मचारीलाई तलब ख्वाउन समेत प्राधिकरणलाई समस्या पर्ने देखिन्छ ।
७. छुट महसुल भार
सरकारले २०७६ चैत १६ गते गार्हस्थ उपभोक्तालाई फागुन र चैतको महसुल छुट दिने निर्णय गर्यो । १ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको हकमा २५ प्रतिशत छुट दिने उल्लेख छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सर्कुलर जारी गरिसक्यो ।
झन्डै ३८ लाख ग्राहकलाई यसरी छुट दिँदा दुई महिनामा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । सरकारले छुट घोषणा गरेपछि स्रोत व्यवस्थापन त्यहीँबाट हुनुपर्थ्याे । तर, यसको भार प्राधिकरणकै टाउकामा हालियो । सरकारले बैशाख १८ गते महसुल सम्बन्धी अर्को निर्णय गर्यो, २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशत छुट ।
लाटो हिसाब गर्दा पनि पछिल्लो निर्णयअनुसार महसुल छुट दिँदा दुई महिनामा अर्को २ अर्ब रुपैयाँ चाहिने देखिन्छ । यसरी छुट दिएबापत प्राधिकरणको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व घट्नेछ । यसको शोधभर्ना सरकारले दिनुपर्ने हो । तर, यसमा ऊ मौन छ । चालू आवमा अपत्यारिलो कागजी नाफा देखाउँदा संस्था थप अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
८. ट्रंक र डेडिकेटेडको भार
प्राधिकरणले २०७३ साउनदेखि ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत उपभोग गर्ने उद्योगको महसुल उठाउन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा संस्थाका उच्च अधिकारीको बेइमानी वा उद्योगीसँगको मिलेमतोले लामो समयसम्म यसरी महसुल नउठाउनुलाई आर्थिक अपचलन भन्ने गरिएको छ ।
अहिलेसम्म यसबापत उठ्नुपर्ने महसुल करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । २०७५ चैतसम्म १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । गलत नियत राखी बिल काटिएको भन्दै उद्योगी यस्तो महसुल तिर्न तयार छैनन् । सरकारले पनि उनीहरूलाई सांकेतिक समर्थन गरेको देखिन्छ । अब झन् अवस्था प्रतिकूल बन्दै गएको सबै उद्योग बन्द भएको अवस्थामा उद्योगले त्यस्तो महसुल तिर्ने कुरै भएन ।
यता प्राधिकरण तथा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ महसुल उठाइछाड्नेमा छन् । यसैले, ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनमार्फत उठ्नुपर्ने रकममध्ये साढे २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँ चालू आवको नाफासँग जोडिएको छ । जुन रकम उठ्ने कुनै सम्भावना छैन । यस्तै खाले अरू रकम पनि नाफामा जोडिएको प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरू स्वीकार्छन् । नउठ्ने रकम नाफामा जोड्नु, अपत्यारिला अंक बाहिर ल्याउनु र बढी चर्चा कमाउन खोज्ने घिसिङको व्यवहारले समेत संस्था दुर्घटनातिर धकेलिँदैछ ।
९. डलर जाेखिम
प्राधिकरणले विद्युत किनेबापत केही प्रवर्द्धकलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र ५० मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङ्दी ‘ए’ को विद्युत डलरमा किन्ने सम्झौता छ । अहिले अमेरिकी डलर मूल्य आकासिएकाले प्राधिकरणलाई यसमा समेत ठूलो आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ ।
हाल एक अमेरिकी डलरको नेपाली मूल्य १ सय २० रुपैयाँ छ । यसको आधारमा विद्युत खरिद रकम भुक्तानी गर्दा अहिले नै प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँ थप व्ययभार थपिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताइरहेका छन् । लकडाउन कति लम्बिन्छ वा विश्व अर्थतन्त्र र डलरको मूल्य कतिसम्म माथि जान्छ त्यो भन्न सकिने विषय भएन । यसैले, आगामी दिनमा डलरको भुक्तानीको भार अझ बढ्ने देखिन्छ ।
१०. प्रसारण लाइन समस्या
निर्माणाीधन अधिकांश प्रसारण लाइन रुग्ण अवस्थामा छन् । ती समयमा पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । घिसिङले संवेदनशील आयोजनाको काम भइरहेको दाबी गरे पनि व्यवहारमा देखिँदैन । पक्कै पनि कोराना असरले आयोजनाको विद्युत उत्पादन अवधि लम्बिन्छ । त्यही अनुसार प्रसारण लाइन पनि प्रभावित हुनेछन् ।
लकडाउनपछि जलविद्युत आयोजना निर्माण भएर विद्युत उत्पादनसम्म पुग्दा प्रसारण लाइन तयार हुने सम्भावना निकै टाढा छ । यसै त सामान्य अवस्थामा प्राधिकरणले समयमा काम गर्न सकेको छैन । अझ कोभिड असरले प्रसारण लाइन निर्माण अवधि वर्षौं धकेलिने देखिन्छ ।
विशेष गरी दोर्दी कोरिडोर, सिंगटी–लामोसाँघु, चिलिमे–त्रिशूली लगायत प्रसारण लाइन समस्यामा छन् । ती क्षेत्रका आयोजना पूरा हुँदासम्म लाइन तयार हुने निकै कम सम्भावना छ । यसो हुँदा प्राधिकरणले जरिवाना तिर्नुपर्ने, प्रवर्द्धकले बिजुली बेच्न नपाउने र प्राधिकरणले बेचेर आम्दानी गर्न नसक्ने हुँदा आर्थिक भार बढ्दै जानेछ । यो पनि प्राधिकरणलाई थला पार्ने अर्को कारण हुनेछ ।
११. सहायक कम्पनीमा लगानी
अहिले प्राधिकरण अन्तर्गत झन्डै २ दर्जन सहायक कम्पनी छन् । तीमध्ये एक दर्जन त उसकै पूर्ण स्वामित्वका छन् । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले मात्र प्राधिकरणलाई वार्षिक मुनाफा दिन्छ । सहायक कम्पनीमार्फत १५ जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । तिनमा वार्षिक रूपमा लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ ।
प्राधिकरणको स्वामित्व अनुसार लगानी नगर्ने हो भने निर्माणमा असर पर्ने तथा विद्युत उत्पादन ढिलो हुने हुन्छ । यसका लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ जोहो गर्नुपर्छ । यसले पनि संस्थाको खर्च बढाउँछ । आम्दानीका क्षेत्र साँघुरिँदै र खर्च बढ्दै जाँदा प्राधिकरण आर्थिक हिसाबमा कसरी माथि उठ्न सक्ला ?
यो सँगै सरकारबाट लिएको ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नु अर्को पाटो छँदैछ । हरेक वर्ष सरकारबाट लिने ऋण थपिइरहेको छ । प्राधिकरणले त्यही अनुसार भुक्तानी फिर्ता गर्न सकेको छैन । कर्मचारी अवकासपछि तिनको पेन्सन व्यवस्था तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि निश्चित बजेट छुट्ट्याउनैपर्छ । वार्षिक खर्चका यस्ता सयौं शीर्षक छन् ।
आम्दानी घटिरहने, सरकारले अनावश्यक भार थपिदिने, वार्षिक खर्चको निश्चित बजेट तयार गर्नैपर्ने हुँदा प्राधिकरण जटिल अवस्थामा पुगेको छ । ३ करोड जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको संस्थालाई अब टेको नदिने हो भने यसको अस्तित्व सकिन समय लाग्दैन । निजी क्षेत्र पनि धराशायी हुन्छ । सिंगो अर्थव्यवस्था तासको घरझैँ भत्किनबाट रोकिने सम्भावना छैन ।
अर्को अंकमा संस्था सुधारका उपाय खोजिनेछ
तामाकोसी ढिलाईमा कर्मचारीको लापरबाही कि भारतको नियत !
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युतगृहभित्र टर्बाइनसहितका उपकरण जडानको काम सकिएको छ । विद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक टर्बाइन, जेनेरेटर, एमएसओभी लगायत कम्प्युटर प्रणाली समेत जडान गरी सुख्खा परीक्षण अर्थात् उपकरण परीक्षण गरेको १२ महिना बितिसक्यो ।
नदीबाट पानी फर्काएर ल्याउने बाटो (सुरुङ) को काम पूरा भएको पनि करिब डेढ वर्ष भइसक्यो । विद्युतगृहका उपकरण घुम्न सुरु भएको भए अहिलेसम्म करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ भइसक्थ्यो । तर, विद्युत उत्पादन समय अझै अत्तोपत्तो छैन ।
कमाइसँगै तामाकोसीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्षित समय गुजे्रको पनि एक वर्ष भयो । यसले लगानीकर्ताको २ वर्षको करिब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमेको छ । अझ ऋणको दैनिक ब्याज, प्रशासनिक खर्च र अन्य खर्च बढेर लागत ३५ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर एक खर्ब रुपैयाँ नजिक पुग्ने संकेत देखिइसकेको छ ।
विद्युतगृहभित्रका उपकरण पानीकै प्रतीक्षामा छन् । जडान भएका उपकरणमा खिया नलागोस् भनेर दैनिक एक पटक तेल हालेर तताउने गरिएको छ । विद्युत उत्पादनबाट दैनिक २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नुको साटो उल्टो खर्च गरिरहनुपर्ने बाध्यता छ । जसका कारण सेयरधनीले प्रतिफल पाउने समय धकेलिँदैछ भने प्रतिफल दर पनि घट्ने अवस्था देखिएको छ ।
मेसिन बिग्रनबाट जोगाउन वा त्यसको हेरचाह गर्न केही कर्मचारी नै खटाइएको छ । यसो हुँदा महिनाको लाखौं रुपैयाँ उपकरण हेरालुका लागि मात्र खर्च गर्नु परेको छ । यसले पनि आयोजनाको लागत बढाइरहेको छ भने प्रतिफल घटाइरहेको छ ।
नदी फर्काइएको पानी ८ किलोमिटर सुरुङबाट विद्युतगृहमा पानी खसालिन्छ । यहाँसम्म पुग्न ३७३ मिटरको तल्लो र ३१० मिटरको माथिल्लो २ वटा ठाडा सुरुङ छन् । ६ वटा युनिटसम्म पानी पुर्याउँन ठाडो सुरुङसहित छेउको कमजोर ठाउँ गरी जम्मा ९ सय मिटर पेनस्टक पाइप जडान गर्नुपर्छ । यहाँबाट आएको पानीले घुमाएका उपकरणबाट विद्युत निस्केपछि ३ किलोमिटर टेलरेस सुरुङबाट पानी पुनः नदीमै मिसाइन्छ ।
उत्पादित विद्युत ४७ किलोमिटर लामो २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत खिम्ती सबस्टेसनमा जोडिन्छ । बाँधदेखि विद्युतगृहसम्मका सबै काम पूरा भएका छन् । अहिलेसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत सकिएको छ । २ वर्षदेखि एक प्रतिशत काम भइरहेको छ । त्यही ठाडो सुरुङको पाइपमै ४५६ मेगावाट विद्युत अड्किएको छ ।
हुन त आयोजना ४ वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्प र भारतले गरेको नाकाबन्दीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भयो । यसले २०७३ साउनमा विद्युत उत्पादन हुने लक्ष्यमा बाधा पुर्यायो । पेनस्टक पाइप ढुवानी गर्न नै महिनौं अझ भनौं वर्षौं लाग्यो । यही कारण २०७५ असारदेखि विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा भएन । पाइप जडानकै कारण विद्युत उत्पादन अर्को एक वर्ष नाघ्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।
तामाकोसी मुलुकमा चरम लोडसेडिङका बेला अर्थात् २०६७ सालदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सपना यसैमा अड्किएको थियो । तत्कालीन समयमा देशको विद्युत जडित क्षमताको आधाभन्दा बढी ऊर्जा यही आयोजनाले उत्पादन गर्न सक्थ्यो । सुरुमा आयोजना २०७२ सालको अन्त्यसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । मुख्य सुरुङको डिजाइन परिवर्तन लगायत कारणले ६ महिना समय लम्बियो । ७२ को सुरुमै भूकम्प गयो । त्यसैमाथि भारतको नाकाबन्दी थपियो ।
प्राकृतिक प्रकोप र भारतले गरेको नाकाबन्दीको असर झेल्दै डेढ वर्षमा बाँधस्थल पुग्न ४ सय ४३ मिटर सुरुङमार्ग निर्माण गरेर काम सुचारु भयो । काबुबाहिरको परिस्थितिले आयोजना केही वर्ष ढिला भए पनि प्रगति सन्तोषजनक देखिन्थ्यो । तर, ठाडो सुरुङ निर्माणमा भारतीय ठेकेदारले बेइमानी गरेका कारण समय लम्बिएको लम्बियै छ ।
आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, टेलिकम, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थानले ऋण दिएका छन् । आम सर्वसाधारण, दोलखाली, सञ्चयकर्ता, ऋण लगानीकर्ता संस्थाका कर्मचारी र प्राधिकरणका कर्मचारीको सेयर छ । देशका ८ लाख नागरिकले आयोजनामा पैसा खन्याएका छन् । आयोजना सबैभन्दा सस्तो, राम्रो प्रतिफल दिने भएकाले नै धेरैको आकर्षण थियो । तर, अब अनेक शंका र प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
आयोजना सफल हुँदा देशकै अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । ठूला आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी र जनशक्ति परिचालन गर्न आत्मबल मिल्छ । विदेशीबिना देशकै पुँजी र जनशक्तिबाट केही हुन्न भन्नेहरूको मुख बन्द हुन्थ्यो । तर, १० वर्षमा पनि आयोजना निर्माण नहुने र लागत खर्ब पुग्ने हो भने हामीले सपनामात्र देखेका रहेछौं भन्ने प्रमाणीत हुन्छ ।
आयोजना असफल हुँदा देशका ठूला लगानीकर्ता सञ्चय कोष, टेलिकम र बीमा संस्थानको लगानी जोखिममा पर्नेछ । भविष्यमा ठूला आयोजनामा स्वदेशी पुँजी जुटाउन समस्या देखिन्छ । सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पनि निराशा उत्पन्न हुने पक्षलाई नकार्न सकिँदैन । समग्रमा देशकै अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्था आउँछ ।
प्राधिकरण आफैंले निर्माण गरेका र निर्माणाधीन आयोजनाको गति सुस्त छ । समय र लागत दोब्बर भइरहेका छन् । तर, त्यही प्राधिकरणका कर्मचारीकै नेतृत्वमा निर्माणाधीन कम्पनी मोडेलका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक भनिए पनि तामाकोसीले त्यसको आभास दिन सकेको छैन । न अन्य कम्पनी मोडलका आयोजनाको प्रगति चित्तबुझ्दो छ ।
विद्युत उत्पादन वर्षदिन धकेलिँदै
गत असारदेखि पेनस्टक पाइप जडान सुरु भयो । यो नै आयोजनाको सबैभन्दा जटिल काम हो । तल्लो खण्ड अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रो र माथिल्लो खण्ड लट–२ को हाइड्रो मेकानिकल ठेकेदार भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेल्वे एन्ड इन्जिनियरिङले गरिरहेको छ । ८ महिनामा तल्लो खण्ड २ सय ११ मिटर र माथिल्लो खण्ड १ सय ३१ मिटर जडान भएको छ ।
विद्युत उत्पादन गर्ने पछिल्लो संशोधित लक्ष्य आगामी चैत अन्तिम हो । एन्ड्रिज र टेक्सम्याकोको कामको गति हेर्दा त्यो सम्भावना देखिँदैन । यही गतिमा काम हुँदा विद्युत उत्पादन अझै एक वर्ष धकेलिने सम्भावना देखिन्छ । जसबाट वार्षिक विद्युत उत्पादनबाट हुने आम्दानी १० अर्ब र ऋणको ब्याज ५ अर्ब गरी थप १५ अर्ब रुपैयाँ घाटा व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।
पेनस्टक पाइप ढुवानी तथा जडानको ठेक्का पाएको टेक्सम्याकोले ढिलाई गरेपछि तल्लो ठाडो सुरुङमा पाइप जोड्ने जिम्मा एन्ड्रिजलाई दिइएको छ । अपर तामाकोसी हाइड्रो पावर लिमिटेड, टेक्सम्याको र एन्ड्रिजबीच एक वर्षअघि (२०७५ पुस २३) थप वित्तीय भार नपर्ने गरी बाँकी काम गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।
तल्लोको तुलनामा माथिल्लो खण्डको काम सहज छ । तल्लो पाइप २७ टन क्षमताको ५ मिटर लम्बाई र माथिल्लो पाइप २.५ मिटर लम्बाईको ९ टनमात्र छ । तल्लोको तुलनामा माथिल्लो खण्डको पाइपको मोटाई पातलो भएकाले जडान चाँडो हुन्छ । यही आधारमा पाइप जडानमा समेत तल्लोभन्दा माथिल्लो ढुवानी र जडान समय पनि कम हुनुपर्नेमा नतिजा उल्टो छ । काममा भारतीय ठेकेदार जिम्मेवार बनेको देखिँदैन ।
२ वर्षदेखि टेक्सम्याकोको उच्च व्यवस्थापनसँग पटक–पटक छलफल भएको छ । विगतदेखिका प्रतिबद्धता पालना नभएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठसहितको टोली टेक्सम्याकोकै मुख्य कार्यालय कोलकाता पुगेर छलफल गर्यो । तर, चित्त बुझ्दो परिणाम देखिएको छैन ।
भारत कि टेक्सम्याकोको नियत खराब ?
४ लटको ठेक्कामध्ये २ वटा ठेक्का भारतीय कम्पनीले पाएका छन्, लट–२ हाइड्रो मेकानिकल टेक्सम्याको र लट–४ प्रशारण लाइन र सबस्टेसनको काम केइसी । चारमध्ये यी दुई ठेक्काको काम सुस्त छ । अहिलेको चासो विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित भएकाले प्रसारण लाइनमा ध्यान गएको छैन । लक्षित समयमै विद्युत उत्पादन भएको भए प्रसारण लाइनकै कारण विद्युत खेर जान्थ्यो । प्रसारण लाइन अझै पूरा भएको छैन ।
टेक्सम्याको भारतको स्टिल र रेल वेको काम गर्ने सफल सरकारी कम्पनी मानिन्छ । तर, नेपालमा डिजाइन, पाइप उत्पादन र ढुवानीदेखि नै बहाना बनाउँदै आएको छ । ठेक्का अनुसार २०७१ चैतसम्म उसले पेनस्टक पाइप ढुवानी सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यतिबेलासम्म ढुवानी नै सुरु गरेको थिएन ।
विनाशकारी भूकम्पलगत्तै भारतले नाकाबन्दी गर्यो । खाडीचौर–चरिकोट सडक विस्तार सुरु भयो । कम्पनीले यसैलाई बहाना बनायो । साइडमा दक्ष र पर्याप्त जनशक्ति नराख्नु, ढुवानीमा पर्याप्त गाडी व्यवस्था नगर्नु र पाइप डिजाइन तथा उत्पादनमै समय लगाउनुले उसको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
प्राधिकरणले आजको दिनमा पनि भारतबाट करिब ५ सय मेगावाट विद्युत किनिरहेको छ । आयातित विद्युत कम हुन नदिन सरकारको निर्देशनअनुसार टेक्सम्याकोले काममा बेइमानी देखाएको पनि चर्चा छ । यसो हो भने सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुको विकल्प छैन । अहिलेको अवस्था उत्पन्न हुनुमा केही हदसम्म प्राधिकरण, कम्पनी र आयोजनाका कर्मचारी पनि जिम्मेवार छन् । उनीहरूले समयमै टेक्सम्याकोलाई दबाब दिन सकेको भए कामको गति बढ्न सक्थ्यो ।
कम्पनी मोडेलमै असर
सरकारले २०६८ सालमा महत्वपूर्ण आयोजना राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्यो । यस्ता १७ अयोजनामध्ये राम्रो प्रगति भएको तामाकोसी मात्र हो । तामाकोसीलाई हेरेर सरकारले केही ठूला जलविद्युत आयोजना तामाकोसी मोडेलमा निर्माण गर्नेभन्दै अघि बढाएको छ । तामाकोसी निर्माण ढिलो हुँदा यो मोडल ठीक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
चिलिमेपछि यसअन्तर्गत ४ आयोजना निर्माणाधीन छन् । केहीको अध्ययन भइरहेको छ । तामाकोसी कम्पनीले पनि यही मोडल अवलम्बन गर्न सक्छ । यसरी काम गर्दा सरकारले अघि सारेका ठूला आयोजनामध्ये केहीमा तामाकोसीको समेत लगानी हुन सक्छ । तर, तामाकोसीमा देखिएको समस्याले कम्पनी मोडलमै नै असफल भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो भने त्यो जलविद्युत विकासका लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।
जलविद्युत आर्थिक समृद्धिको पहिलो खुड्किलो हो भन्ने प्रमाण दोलखालीले भोगिसके । यदि, माथिल्लो तामाकोसी सुरु नभएको भए सिंगटीदेखि उत्तरतर्फ अहिलेसम्म मोटरबाटो पुग्थ्यो कि पुग्दैनथ्यो भन्न सकिँदैन । बाँदर लड्ने ठूला चट्टानी भीरहरू फोरेर लामाबगरसम्म तामाकोसीले नै सडक पुर्यायो । दोलखा–सिंगटी सडक आयोजनाले स्तरोन्नती गर्यो । अहिले कालोपत्रे भइसकेको छ । सिंगटी– लामाबगर सडक व्यवस्थितरूपमा ग्राभेल भएको छ ।
भोर्लेदेखि मार्बू कोप्लाङसम्मको सडक पनि आयोजनाले नै तयार गर्यो । सरकारले एउटा भोर्लेको पुल बनाउन दशक लगाइसक्यो । आयोजना आफैंले अस्थायी पुल हालेर सडक सुचारु गराएको छ । त्यसका प्रत्यक्ष लाभग्राही स्थानीय नै हुन् । यसले अरू लगानीका ढोका समेत खुलेका छन् ।
सडक व्यवस्थित भएसँगै सरकारी कर्मचारी समेत नियमित नबस्ने लामाबगर, गौरीशंकर, मार्बू जस्ता ठाउँमा विद्यालय भवनहरू व्यवस्थित भए । शिक्षकहरू नियमति छन् । पठनपाठन नियमति छ । स्वास्थ्य चौकीमा कर्मचारी हुँदा स्थानीयले उपचार पाइरहेका छन् । अतिदुर्गम लामाबगर जस्ता गाउँ उच्च ओहोदाका कर्मचारीदेखि सर्वसाधारणको पर्यटन गन्तव्य भएका छन् ।
स्थानीयले ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषिमा नयाँ प्रविधि, खानेपानी, सीपमूलक तालिम पाएका छन् । रोजगारी गर्न जिल्ला बाहिर र देशका विभिन्न ठाउँबाट सयौं युवाहरू आइरहेका छन् । स–साना बजार खुलेका छन् । व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदो छ । स्थानीयबासी जलविद्युतको मालिक बन्ने अवसर सिर्जना भएको छ । विदेशी विशेषज्ञहरूलाई रोजगार दिएर भित्र्याइएको छ ।
तामाकोसी जस्ता ठूला आयोजनाकै कारण सिमेन्ट, डन्डीका उद्योग खुलेका छन् । देश सिमेन्ट र डन्डीमा आत्मनिर्भर भएको छ । उता देशको राजस्व बढेको छ । आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएपछि केहीले स्थायी रोजगार पाउनेछन् ।
सेयर किन्नेले वर्षौंसम्म बसीबसी नियमित लाभांश पाउँनेछन् । एउटा खिम्तीबाट वार्षिक करोडौं रुपैयाँ रोयल्टी पाएको जिल्लामा अब अर्बौं रुपैयाँ थपिने अवस्था छ । जुन स्थानीय सरकारको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत हुनेछ । रोयल्टी जनताको जीवनस्तर उकास्ने विकास र रोजगारी सिर्जनामा खर्च गर्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । इलामको माई खोलामा सुपर माई नामका ३ जलविद्युत आयोजना छन् । ७.८ मेगावाटको सुपर माई २०७५ कात्तिकमा केन्द्रीय प्रणालीमा जोडियो । निर्माणाधीन २ आयोजनाको काम धमाधम भइरहेको छ ।
सरकारी होस् वा निजी क्षेत्र तोकिएको लागत र समयमा पूरा भएका आयोजना कमै होलान् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विद्युत बेच्ने तोकिएको मितिसम्म काम नसकेर धेरैले समय संशोधन गर्न निवेदन दिइरहेका छन् । कतिपयले त विद्युत उत्पादन गरेर पैसा कमाउनुको साटो उल्टै हर्जना तिर्न बाध्य छन् । तर, सुपर माईले तोकिएभन्दा ६ महिनाअघि नै विद्युत उत्पादन गर्न सफल भयो ।
काम सुरु भएको करिब १८ महिनामै उत्पादित विद्युत प्रणालीमा जोडियो । जबकि, निर्माण अवधी २ वर्ष तोकिएको थियो । माई खोलामा धेरै आयोजना छन् । सबैको नाममा माई जोडिएकै छ, माई इलाम जिल्लाको पहिचान पनि बनेको छ । पछिल्लो समय माई खोला र जलविद्युत आयोजना एकअर्काका पूरक जस्तै बनेका छन् ।
सुपर माईले लक्षित समयअघि विद्युत उत्पादन गरेको भन्दै प्राधिकरण र विद्युत विकास विभागले आफ्नो स्थापना दिवसमा प्रवर्द्धक सुपर माई हाइड्रो पावर कम्पनीलाई समान पनि गरे । सम्भवतः प्राधिकरण र विभागको इतिहासमै यो पहिलो सम्मान हो ।
६ वर्षअघि जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समूहले यही अवधिमा १३.८ मेगावाटका ३ आयोजना पूरा गर्यो । र, २ आयोजना अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यी आयोजना आगामी वर्षभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य छ । समूहले हरेक वर्ष नयाँ र अघिल्लोभन्दा ठूलो आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
५ आयोजना बनाउँदासम्म काम गर्ने र मौसमको समेत अनुभव भइसकेको सुपर माई कम्पनीका निर्देशक माधवप्रसाद मैनालीले भने बताए । ‘आयोजना बनाउँदा साउनमा सुरु गर्ने र भदौसम्म साइडमा तयारी गरेर बर्खालगत्तै कामलाई गति दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति कामको प्रगति गर्न सकिन्छ हिउँदमै हो । बर्खा लागेपछि प्रगति सुस्त हुन्छ ।’
अरू आयोजना पनि उस्तै
सुपर माईदेखि केही माथि सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले ९.६ मेगावाटको सुपर माई ‘ए’ सुरु गरेको छ । एक वर्षमै आयोजनाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भएको छ । प्राधिकरणसँगको पिपिए अनुसार २०७७ पुससम्म विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ । तर, ९ महिनाअघि नै अर्थात् २०७७ बैशाखमै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यही समूहले सुपर माई क्यासकेड पनि सुरु गरेको छ । सुपर माईको विद्युतगृहबाट निस्कने पानी प्रयोग हुने गरी क्यासकेड निर्माण भइरहेको छ । असोजबाट काम सुरु गरेको यो आयोजना पनि बैशाखमै पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।
यदि, सुपर माई क्यासकेड बैशाखमै पूरा भए ७ महिनामा विद्युत उत्पादन हुन्छ । ७ महिनामै आयोजना पूरा हुनुलाई जलविद्युत क्षेत्रमा चमत्कार मान्नुपर्छ । प्राधिकरणसँगको सिओडी तालिका (व्यावसायिक विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने मिति) भन्दा आफ्नै कार्यतालिका हुने गरेको सुपर माई कम्पनीका अध्यक्ष मोहनविक्रम कार्कीले बताए ।
‘सुपर माई ‘ए’को वित्तीय व्यवस्थापन २०७५ माघमा भयो, एउटा आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि लगानीकर्ता पनि खोजी–खोजी आउँदा रहेछन्,’ सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीमा समेत प्रबन्ध सञ्चालक रहेका कार्कीले भने,’ ‘बैंकहरूले पनि लगानी गरे, हामीले पनि थप्यौं । काम गर्नेलाई लगानी अभाव नहुने रहेछ भन्ने लागेको छ ।’
अहिलेसम्म १० मेगावाटका आयोजना बनाए पनि अब २० मेगावाटतिर लाग्ने सुपर माई ‘ए’का निर्देशक मैनालीले बताए । ‘विश्वासमा काम गर्दा वित्तीय व्यवस्थापन ढिलो भए पनि साइडमा काम सुरु गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो समूहले अहिलेसम्म बनाएका आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन हुँदा १० प्रतिशत काम भइसकेको हुन्छ ।’
एउटा आयोजना गर्न धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरण धाउनुपर्छ । जिल्लाका प्रशासन, वन, मालपोत, नापी, सुरक्षा निकायमा पनि उत्तिकै काम पर्छ । सबैको कागजी काम पूरा भएपछि बल्ल आयोजनास्थलमा काम हुन्छ ।
आयोजनास्थलमा पनि स्थानीय, जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरिरहनुपर्छ । आयोजनास्थलमा कम्पनीका अध्यक्ष, निर्देशक लगायत टिमले अवलोकन गरिरहेका हुन्छन् । आइपर्ने समस्यामा तत्काल निर्देशन दिने र बाधा अड्काउ फुकाइदिने चलनले कामको गति बढाएको हुन्छ । सिभिल, हाइड्रो र इलेक्ट्रो मेकानिकलका ठेकेदार समानान्तररूपमा खटिएका हुन्छन् । पेनस्टक पाइप, गेट, जेटरेटर, ट्रान्सफरमर जस्ता उपकरणको डिजाइन, उत्पादन र ढुवानी जडान कार्यतालिका अनुसार गरिएको हुन्छ । कुनै सामान नभएका कारण जनशक्ति खाली बस्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन ।
आयोजनामा स–सानो समस्याले महिनौं काम रोकिन्छ । माथिको आदेश पर्खनुपर्छ । तर सुपर माईका प्रवर्द्धक र व्यवस्थापन समूहले समस्या आउनासाथ तत्काल समाधान गर्छन् । साइटमै बसेर आयोजनाको व्यवस्थापन गर्दै आएका आयोजना व्यवस्थापक उत्तम पौडेल आयोजना समयमै पूरा हुनुमा लगानीकर्ता, व्यवस्थापन समूह र निर्माण व्यवसायीको समन्वय नै रहेको बताउँछन् । एकपछि अर्को अनुभवले खारिँदै गएपछि अघिल्लो आयोजनाका कमजोरी अर्कोमा सुधार गरेर जाँदा सहज भएको उनको अनुभव छ ।
दिनको रिपोर्ट दैनिक कम्पनी र निर्देशकहरुले लिन्छन् । लगानीकर्ताको समूह व्यवस्थापन राम्रो छ । रहेक निर्णय गर्दा सामुहिक छलफल गरेर निर्णय लिने गर्छन् । रहेक विषयमा तत्कालै निर्णय लिने गर्दा कामलाई गति दिन सजिलो भएको छ ।
आयोजना स्थलका खोला फर्काउने पानीको मुहान, बालुवा थिग्रयाउने पोखरी, पानी आउँने मुख्य मार्ग पेनस्टक पाइप र विद्युत उत्पादन हुने ठाउँ विद्युत गृहको काम एकै साथ भइरहेका छन् । सिभिल, हाइड्रो मेकानिकल, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल र विद्युत उत्पादनपछि सव स्टेशनसम्म पुग्ने प्रसारण लाइनको काम समानान्तर गतिमा भइरहेका छन् ।
ढुवानीको काम, जडानको काम भइरहेका छन् । कामका लागि प्रयाप्त उपकरण परिचालन गरिएका छन् । आवश्यक जनशक्ति हरेक क्षेत्रमा छन् । तर कहिले काँही चाहिनेभन्दा बढी जनशक्तिले पनि काम अवरुद्ध नहोस् भन्नेमा पनि उनीहरु सजग छन् । यी सबैको हरेक सूचना र जानकारी प्रवर्द्धकहरूले दैनिक रूपमा लिइरहन्छन् र आवश्यक निर्णय लिइरहन्छन् ।
निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता पश्चात पनि हरेक हप्ता कामको लक्ष्य दिन्छन् । लक्ष्य पूरा भएको नभएको अनुगमन पनि हुन्छ । भुक्तानीमा कुनै समस्या छैन । सिभिल निर्माणको काम गर्दै आएका अरुण निर्माण सेवाका सञ्चालक कल्याण सिग्देलले आवश्यक समन्वय र भुक्तानीको समस्या नभएपछि काम सोचे जसरी नै अघि बढ्ने बताए ।
निर्माण व्यवसायीलाई पनि सामान खरिद गर्न, मजदुर परिचालन गर्न पैसाकै आवश्यकता पर्छ । आयोजनामा काम गर्ने मजदुरहरू जति खुशी पार्न सकियो काम पनि उत्तिनै लिन सकिन्छ । मुख्य कुरा आयोजनाका लागि हरेक कामको प्रगतिमा सम्झौता अनुसार भुक्तानी र सहयोग प्रवर्द्धकबाट पाएपछि कामको प्रगति राम्रै हुने गर्छ । यस्तै व्यवस्थापन रहेक अब १० मेगावाटसम्मका आयोजना ६ महिनामै पूरा गर्ने आत्मबल पलाएको सिग्देलले बताए ।
स्थानीय वातावरण र पूर्वाधार
विकासका लागि सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । त्यसमा पनि जलविद्युतका लागि सडक र प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण हुन् । ठूला उपकरण ढुवानी गर्नुपर्ने हुँदा सडक दुरुस्त हुनुपर्छ । एउटा लगानीकर्ताले सडक, प्रसारण लाइन जस्ता काममा ठूलो लगानी गर्दा आयोजनाबाट प्रतिफल ढिला आउँछ । जति चाँडो प्रतिफल आउँछ त्यस्ता ठाउँ नै लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त हुन्छ ।
इलामका लागि सडक पहुँच राम्रो छ । इलाममा निर्माण भएका हरेक जलविद्युत आयोजनाहरु मेची राजमार्गबाट १०/१२ किलोमिटर दुरीमा छन् । आयोजनास्थलसम्म पुग्न मुख्य राजमार्गदेखि सडक निर्माण गरेका छन् । केही स्थानीय तहले खनेका साँघुरा सडकलाई विस्तार र स्तरोन्नती समेत गरेका छन् । यसले आयोजना आफैंलाई त सहज भएको छ नै । तर अन्य आयोजनालाई समेत लगानीका ढोका खुलेका छन् । स्थानीयलाई सहज भएको छ । स्थानीय तहको लगानी बचत भएको छ ।
त्यसैगरी, जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको बजार महत्वपूर्ण हो । नेपालमा अहिलेसम्म विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण र व्यापारको जिम्मेवारी विद्युत प्राधिकरणले मात्र गर्दै आएको छ । विद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्ने प्राधिकरणको सब स्टेशनसम्म पुग्न लामो प्रसारण लाइन बनाउन बढी खर्च पनि लाग्छ, विद्युत चुहावट पनि हुन्छ । खर्च बढी लाग्नु र चुहावट हुनु भनेको पनि आम्दानी घट्नु र प्रतिफल कम आउनु हो ।
इलामको गोदकमा प्राधिकरणले सबस्टेशन निर्माण गरेको छ । आयोजना निर्माण गर्नासाथ विद्युत जोड्न पाइने हुँदा पनि इलाममा लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको स्थानीय मेघनाथ ढुंगानाको बुझाई छ । स्थानीयस्तरमा काम गर्ने वातावरण सहज छ । स्थानीय तह र स्थानीयबासीबाट सहयोग भएकाले काम गर्न सहज भएको लगानीकर्ताको भनाइ छ ।
‘आयोजनास्थलमा पूर्वाधार तयार भएको, काम गर्ने वातावरण समेत भएकाले एउटा आयोजना पूरा गर्ने वित्तिकै एकैसाथ अरु २ आयोजनाको काम गरेका हौं’ सुपरमार्र्र्ईका निर्देशक माधव मैनालीले भने । लगानीमैत्री वातावरण हुँदा लगानीकर्ता आउँछन् । बगेको पानी सदुपयोगमा आउँछ । आयोजना बनाउँदा लगानीकर्ताले मात्र फाइदा लिदैनन् । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्र्तगत खानेपानी, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र कृषि क्षेत्रमा समेत सहयोग गर्ने गरेका छन् ।
आयोजना चाँडो पूरा हुँदा
जलविद्युत क्षेत्रमा आफूलाई ‘बादशाह’ भन्नेले व्यवस्थापन गरेको १०/१५ मेगावाटका आयोजना समेत ५/६ वर्षसम्म पूरा नभएका उदाहरण प्रशस्त छन् । आयोजना ढिला हुँदा प्रशासनिक खर्च, बैंकको व्याज बढ्ने र विद्युत उत्पादनबाट हुने आम्दानी पनि गुम्ने गरेको छ ।
चाँडै आयोजना पूरा हुँदा प्रशासनिक खर्च बचत हुन्छ । ऋणको व्याज तिर्नुपर्ने समयमा किस्ता तिर्न सुरु हुन्छ । विद्युत बिक्रीबाट आम्दानी हुने हुँदा लगानीकर्ताले चाँडो प्रतिफल पाउँछन् । सरकारले समयमै रोयल्टी पाउँछन् । त्यसको हिस्सा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म पुग्छ ।
यो समूह जलविद्युत क्षेत्रका लागि नयाँ समूह हो । नेपलमा २५ वर्ष अघिदेखि निजी क्षेत्र जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय छ । तर सुपर माईमा लगानी र व्यवस्थापन गर्ने समूहको अनुभव १० वर्ष पनि पुगेको छैन । जलविद्युतमा छिर्न सुरुमा दोलखाको कुथली खोलामा १ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्यो । यो आयोजना बनाउन २ वर्षभन्दा लाग्यो । तर पहिलो सिकाइ भएकाले खर्च पनि बढी नै भयो ।
त्यसैको अनुभवले दैलेखमा ५ मेगावाटको द्घारी खोला आयोजना निर्माण गर्याे । यी २ आयोजनाको निर्माणको अनुभवले इलाम छिरेको मोहन कार्की र माधव मैनालीको व्यवस्थापकीय समूहले जलविद्युत आयोजनाको क्षमता समेत बढाउँदै निर्माण गर्न थालेको छ । पुरानो अनुभवबाट ७.८ मेगावाटको सुपर माई १८ महिनामा पूरा गरेर जलविद्युत क्षेत्रमा नै छोटो समयमा पनि आयोजना बन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
माई इलामकै सबैभन्दा ठूलो खोला हो । यसमा विद्युत उत्पादन भइरहेका र निर्माणाधीन ११ आयोजना छन् । सुपर माई ए, सुपर माई र सुपर माई क्यासकेड मुख्य हुन् । साम्लिङ पावर, हिमाल दोलखा हाइड्रो पावरले क्रमशः १० मेगावाट र ४ मेगावाट तथा यसको क्यासकेड ८.२ मेगावाट निर्माण भएका छन् । यो आयोजनाको तल र सानिमाको आयोजनाभन्दा माथिको बीचको भागमा एउटा ५ मेगावाटको आयोजना रहेको छ ।
माई खोलामा रहेका ११ आयोजनामध्ये अधिकांश पूरा भएका र केही निर्माणाधीन छन् । सगरमाथा कम्पनीले निर्माण गरिरहेको सुपर माई ‘ए’ भन्दा माथि पञ्चकन्या समूहले निर्माण गरेका अपर माई, अपर माई ‘सी’ छन् । यिनबाट १२ र ६ गरी १८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । नदीको पुच्छारमा सानिमा हाइड्रो पावर कम्पनीले २२ र क्यासकेड ७ गरी २९ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ ।
इलामका मा, जोगमाई, सिद्धी, पुवा र देउमाई जलविद्युतका लागि सम्भाव्य खोला हुन् । यी सबै सम्भावित स्थानमा विद्युत आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । माई खोला बाहेक जोगमा मा ७.६ मेगावाट, तल्लो जोगमाई ७.२ मेगावाट र त्यसको क्यासकेड ७ मेगावाटका छ ।
पुवा खोलाबाट प्राधिकरणले ६.२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । सोही खोलामा निजी क्षेत्रबाट पुवा खोला–१ (४ मेगावाट) र पुवा खोला–२ (५ मेगावाट) निर्माणाधीन छन् । सिद्धी खोलामा जोशी हाइड्रोका ३.५ मेगावाट र ९.६ मेगावाटका आयोजना छन् ।